Amin'ny maha-mpitarika momba ny indostria famatsiana foto-kevitra, AKF dia mikendry ny ho iray amin'ireo marika manan-danja indrindra eo amin'ny sehatry ny vokatra ara-pitsaboana ary manome ny mpanjifa teknolojia sy serivisy tsara indrindra. Izahay dia mitady mialoha ny hifandray aminao amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy hiresaka ny fironana farany fampandrosoana ny indostria sy ny vahaolana amin'ny valanaretina.
Ny AKF dia hampifantoka ny asany voalohany amin'ny sehatry ny saron-tava fiarovana azo ampiasaina, hamorona sanda tokana ho an'ny mpanjifa mpomba ny asa miaraka amin'ny vahaolana amin'ny rafitra sy serivisy ampiarahina lanja hafa, ary ho lasa irreplaceablemember an'ny orinasa mpamorona dabilio manerantany eo amin'ny sehatry ny famatsiana fanafody. .Noraisinay ny foto-kevitra momba ny famahana ny olan'ny mpampiasa ary mahatonga ny mpampiasa ho mora.
Ny fikatsahana ny AKF dia ny "traikefa ho an'ny mpanjifa". ny fahazoana tsara ny hevitry ny mpanjifa sy ny filan'ny mpanjifa. Mino mafy izahay fa ny fahaizana matihanina lalina ihany no afaka mandresy ny fahatokisana maharitra ny mpanjifa amin'ny sehatry ny asa matihanina.
- MISIONY VISION -
Araka ny fantatsika rehetra, ny fahasimban'ny tontolo iainana dia niteraka fandotoana rivotra sy fanimbana bakteria. Ny isan'ny olona maty isan-taona noho ny aretin'ny taovam-pisefoana sy ny aretin'ny bacte-rial dia mihoatra ny 20 tapitrisa manerantany. Ny sarontava dia nanjary vokatra ilaina amin'ny ity areti-mandringana ity. Amin'ity tranga ity dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny ady tamin'ny virus coronaavavista ny taona1919. Ny saron-tava AKF sy saron-tava kn95 dia fomba roa manaparitaka ny fahasimban'ny fahasalaman'ny olombelona ateraky ny bakteria, viriosy ary airpollutants amin'ny alàlan'ny fidiran'ny hoditra sy ny fifohana rivotra. Izy ireo no mpiambina ny fahasalaman'ny olombelona.
Ny orinasa dia nanomboka niditra tao amin'ny indostrian'ny sarontava tamin'ny fiandohan'ny valanaretina teepidemika, ary niarina haingana tao anatin'ny toe-javatra sarotra tokoa. Amin'izao fotoana izao, ny saron-tava AKF dia niditra an-tsena niaraka tamina habetsahana betsaka, manome vokatra tena tsara ho an'ny besinimaro hanohitra ny valanaretina sy hiarovana ny fahasalamana.
AKF dia mifantoka amin'ny filan'ny mpanjifa sy ny olana, amin'ny fanomezana vokatra manokana sy vahaolana ho an'ny mpanjifanay amin'ny alàlan'ny inno-vation sy valiny haingana, izy rehetra dia ahafahan'ny mpanjifa miaina fifandraisana mahomby sy azo iaraha-miasa.
Ny AKF dia mandray ny filan'ny mpanjifa ho andraikiny ary manatsara hatrany ny fahaizany amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola R&D, mahatakatra ireo fanamby atrehin'ireo mpiambina amin'ny sehatry ny serasera matihanina ary mametraka ny laharam-pahamehana, ary lasa manam-pahaizana momba ny Vahaolana.